Mpanao politika Malagasy Mila fiovan-toetra goavana
Famoriam-bahoaka eny Analakely Alefa handoto ny hetsika ireo “gros bras”
Mafampana ny toe-draharaha, ary miandry izay hiseho rahampitso eny anoloan’ny Lapan’ny tanàna Analakely, hisian’ny famoriam-bahoakan’ny depiote mpanohitra ny rehetra. Malaza fa kotrehina hokorontanina izany, ary efa mandeha ny fanangonana vatan-dehilahy na “gros bras” handrava sy handoto ny hetsika.
Guy Maxime Ralaiseheno “Aoka tsy ho sakanana ny hetsiky ny depiote”
Aza sakantsakanana amin’ny famoriam-bahoaka hanaovany tatitra mikasika ny zava-misy eto amin’ny firenena ny solombavambahoaka na iza izy na iza hoy Rahaiseheno Guy Maxime, mpanao pôlitika, omaly. Hiantohan’ny lalampanorenana sy ny lalana mifehy ny olom-boafidy, indrindra ny lalana mifehy ny antoko mantsy ny fanaovan’ny solombavambahoaka izany hoy izy.
Antoko politika ABA Miainga amin’ny fianakaviana ny fampandrosoana
Omaly no nampahafantarina tamin’ny fomba ofisialy tetsy amin’ny foibeny Antsahabe ny fitsanganan’ny Antoko politika ABA (Antokom-Bahoaka Malagasy).
Depiote mpanohitra Nihaona tamin’ny Amerikanina sy Frantsay
Mandeha ny rahom-bava avy amin’ny fitondram-panjakana momba ny hanakanana ny famoriam-bahoaka hataon’ny depiote TIM, MAPAR, MMM, aryny tsy miankina hanao tatitra amin’ny vahoaka eny anoloan’ny Lapan’ny Tanàna Analakely rahampitso sabotsy.
Ravalomanana sy Rajoelina Hany mbola misongadina
Ny filohan’ny antoko Tiako i Madagasikara, Marc Ravalomanana, izay efa nanambara tamin’ny fomba ofisialy ny filatsahan-kofidiany ho filoham-pirenena sy ny filoha nasionalin’ny vondrona politika MAPAR, Andry Rajoelina, hatreto no hita hany mbola misongadina amin’ny fihetsiketsehana maneho ny fahavononany hiatrika fifidianana na dia mbola tsy nanambara ny filatsahany aza moa itsy farany.
Miaramila misotro ronono Tsy maintsy hanohana kandida
Efa 10 taona mahery izao no nitakian’ireo miaramila misotro ronono ny zo tokony nisitrahany nanomboka ny tetezamita no nankaty, raha ny fanazavan’ny filoha nasionalin’ny fikambanan’izy ireo, Jean Solo Randrianasimanana.
Mpanao politika Malagasy Donton’ny fitiavan-tseza
Tsy azo iadian-kevitra, fa ny mpanao politika no tena mpamotika ity firenentsika ity. Ny vahoaka etsy andaniny, toa nohabadoina sy nampahantraina hatrany, ka tsy mahalala izay tokony hataony intsony.
Mila ezaka sy finiavana goavana ny fanovana ny fanaovana politika eto Madagasikara. Ny toetry ny mpanao politika mihitsy no manimba ny politika ary namotika ny firenena.
Toa lasa fitadiavam-bola sy fangoronan-karena ary fomba haingana hanaparam-pahefana ny fanaovana politika sy fiakarana eo amin’ny fitondrana. Nisy akony ratsy ary tena nangidy ho an’i Madagasikara ireo krizy nifandimby teto. Firenena mahantra indrindra eto ambonin’ny tany i Madagasikara kanefa tany anisan’ny manana harena ankibon’ny tany sy an-dranomasina betsaka indrindra. Tsy maintsy misy ny fianarana ataon’ireo mpanao politika, misy ny fanovana ny fomba fisainana, zava-dehibe ny fananana toetra manorina fa tsy mandrodana lava noho ny fialonana. Ezaka hahatongavana amin’izany no anton’ny fihaonana etsy amin’ny Hotel Carlton izay atrikasa andiany faha-3 miompana amin’ny famolavolana vinam-piarahamonina sy fandaharanasa politika ho fampanjakana ny demokrasia milamina sy tsy manavaka ity tohanan’ny programan’ny Firenena mikambana momba ny fampandrosoana ity. Miainga amin’ny tetiandro fampandrosoana hatramin’ny taona 2030 mivoy ireo singa fototra miisa 5 na «5P» antoky ny fampandrosoana maharitra tsy mialonjafy moa io fifanakalozana sy adihevitr’ireo mpanao politika io dia ny izao tontolo izao, ny fiaraha-miombon’antoka, ny filaminana, ny fampivoarana ary ny mponina. Mitaky fanaovana politika vaovao mifantoka sy manome vahana tanteraka ny vahoaka ny fampandrosoana maharitra, hoy ny solontena lefitry ny Pnud monina eto Madagasikara Marie Dimond. Anisan’ny antoko tazana nahatonga solontena eny an-toerana ny HVM, TIM, MAPAR, MMM, PSD…ary tsapa fa nafana ny adihevitra omaly. Ho mora kokoa ho an’ny vahoaka ny maneho am-pahendrena ny safidiny rehefa mazava ny fandaharanasa sy ny vina avy amin’ireo antoko politika. Resaka iray mbola mila dinihana lalina koa anefa ilay fanomezana zavatra kely ho fanambazana ny mpifidy…angamba satria lasa izay mahatolotolotra no mahazo tombony. Tsy mbola vita ny fampihavanam-pirenena eto ary tena mila tanterahana mialoha ny fifidianana mba hampisinda ny ahiahy.
RTT sy Ramano F